Yintoni i-freelancer | EzeMali yoQoqosho
Ngokuqinisekileyo ngaphezu kwexesha elinye ulivile eli gama wezifanekiso. Ngapha koko, sinokuthi isefashonini ngoku kwaye igama layo ngeSpanish lizimele (nangona kukho iingcali ezithile ezinika umahluko phakathi kwezi zimbini).
Kodwa, Yintoni i-freelancer? Ziziphi iimpawu enazo? Yahluke njani kwi-freelancer? Ukuba ufuna ukusebenza njenge-freelancer, apha uya kufumana yonke into oyifunayo ngaphambi kwayo nayiphi na enye into.
1 Yintoni ukuzimela
1.1 Umahluko phakathi kokuzimela kunye nokuzimela
2 Iimpawu ze-freelancer
3 Kuthatha ntoni ukuba yi-freelancer?
3.1 Yiba nokuzimisela
3.2 Izinto zakho zokusebenza
3.3 Yiba nabathengi
4 Apho ungafumana khona umsebenzi
Into yokuqala esiza kuyenza kukuba uqonde ngokupheleleyo ukuba lithetha ukuthini eli gama. Umntu osebenza ngokuzimeleyo ngu umntu osebenza kwiakhawunti yakhe, oko kukuthi, ngokuzimeleyo. Inika iinkonzo zayo kwabanye abantu okanye iinkampani, oko kukuthi, isebenzela abantu besithathu abacela umsebenzi wayo.
Njengoko bengengabo abenkampani, bengasebenzi nakwinkampani, kunoko bazenzela ngokuzimeleyo (bezenzela ngokwabo, benikela ngomsebenzi wabo kwabanye), kufuneka bazihlawulele ngokwabo iindleko. Oko kukuthi, iiholide, ikhefu lokugula, i-inshurensi, irhafu, njl., yonke into ngeendleko zakho.
Umahluko phakathi kokuzimela kunye nokuzimela
Njengoko besinixelele ngaphambili, ababhali abaninzi baseka uluhlu lweeyantlukwano phakathi kwe-freelancer kunye ne-freelancer. Kodwa yintoni ebenza bakhangeleke njengabantu ababini abahlukeneyo?
Kwelinye icala, kuthiwa Abasebenzi babucala babandakanyeka kwimisebenzi eyenzeka ngamaxesha athile kunye nomvuzo othile kunye nexesha elichaziweyo. Oko kukuthi, baqeshelwe inkonzo ethile kwaye, xa oku kwenziwe, ubudlelwane buphela. Kwelinye icala, kwabo baziqeshileyo imisebenzi iya kuba yeyobuchwephesha okanye ishishini, ixesha elingamiselwanga kunye nomvuzo oguquguqukayo. Inyaniso kukuba zonke ii-freelancers ngaxa lithile zinemisebenzi ezimeleyo kunye nehlala ixesha elide; kwaye okufanayo kunokwenzeka kumntu osebenza ngokuzimeleyo.
Omnye umahluko kukuba Abasebenza ngokuzimeleyo abanyanzelekanga ukuba babhalisele iRETA (Ulawulo lwabasebenzi abaSebenzayo), kodwa ewe kwi-IAE (Irhafu kwiMisebenzi yezoQoqosho). Ngoba? Ewe, kuba ukuba umsebenzi wakho awufikeleli kumvuzo omncinci womsebenzi, akufuneki udlule kuKhuseleko lweNtlalo. Ewe kunjalo, xa sele ufikile kuyimfuneko enyanzelekileyo ukuba awufuni ukuba iHacienda inkqonkqoze emnyango wakho.
Ngokusekwe kuko konke oku kungasentla, sifumanisa ukuba i-freelancer ngumntu:
I-Autónoma, oko kukuthi, uyazisebenzela. Oku kuthetha ukuba nguye ogqibayo ngexesha aza kusebenza ngalo, iintsuku aza kusebenza ngazo kunye nendawo (inokuba likhaya lakhe, indawo yakhe yeholide, iofisi, njl.njl.)
Ngumphathi wakhe, ngenxa yokuba ulungelelanisa usuku lwakhe lokusebenza kwaye unqume iiyure aza kuzisebenza, ukuba uya kuyenza nini, uya kulawula njani, njl.
Uyayikhathalela imali yakho, okanye unikeze omnye umntu oku, kodwa kufuneka uhlawule iindleko zakho, irhafu, i-inshurensi ...
Unokukhetha abathengi bakho. Kwaye ushiye ongamthandiyo. Ekuqaleni oku akunangqondo kodwa xa unozinzo kwaye ngokukodwa udumo luya phezulu kuba lula kakhulu kuba uyazi ukuba omnye umxhasi uya kufika.
Misela awakho amaxabiso. Ngokuqinisekileyo, yonke into iya kuxhomekeka kwimarike, ukhuphiswano, njl. nto leyo enokumiselwa sisikali.
Kuthatha ntoni ukuba yi-freelancer?
Umsebenzi ozimeleyo, okanye umsebenzi ozimeleyo, ayisiyonto ihonjiswe kuhlobo oluthile lomsebenzi. Enyanisweni, kukho amacandelo amaninzi nangakumbi apho olu hlobo lwabasebenzi luxhaphakile. Noko ke, kuyinyaniso ukuba Amacandelo enkqubo, uyilo lwemizobo, uyilo lwewebhu, uguqulo, uMphathi woLuntu, ukufota, iiklasi zabucala, umbutho weminyhadala, ukuthengiswa komxholo ... kulapho kugxilwe khona kakhulu.. Nakuba kunjalo, zininzi ngakumbi.
Kodwa, ngaba kuyimfuneko ukuhlangabezana nothotho lweemfuno ukuze ube ngumntu ozimeleyo? Inyaniso kukuba ewe. Ngqo ngqo:
Sithetha ngomsebenzi apho ubambe isandla esinye ngaphambili esinye ngasemva. Awunayo imvume okanye i-inshurensi yokuba abathengi bakho abayi kukushiya (okanye uya kufumana abaxhasi). Ke iindleko zinokutya imali oyongileyo kwaye, ukuba akukho bathengi, akukho mali.
Ngesi sizathu, kuya kufuneka ugcine intloko yakho igxile kakhulu kwiprojekthi ukuze uyenze, unikezele iiyure ezininzi ekuzalweni kwayo kunye nokuthatha amanyathelo ayo okuqala. Yaye loo nto ayingombandela nje weeyure, iintsuku, iiveki okanye iinyanga. Ngumcimbi weminyaka.
Izinto zakho zokusebenza
Ukuzimela, akukho mntu uya kukunika izixhobo zokusebenza (Ngaphandle kokuba inkampani okanye umntu enze njalo, kodwa kunqabile). Ke ngoko, kuya kufuneka utyale imali ekufumaneni yonke into oyifunayo ukuze unikezele ngenkonzo. Kwaye oko kuthetha ukutyala imali kuwe.
Ewe, kuyinyani ukuba uyifumana emva kwexesha, kodwa ekuqaleni inokubiza.
Mhlawumbi ngumgaqo wokuzisebenzela. Ngaphandle kwabathengi awukho njengomsebenzi kuba awukwazi ukusebenza. Yiyo loo nto kufuneka ujonge abantu okanye iinkampani ezifuna ukuqesha iinkonzo zakho.
Ayisiyonto ilula le, kuba kuya kufuneka ubone ukuba baphi na abathengi bakho, ubeke ixabiso elifanelekileyo laloo nkonzo unikezelayo, kwaye ngaphezu kwayo yonke into unike iziphumo kubathengi (kuba ukuba awukwenzi oko abayi kuhlala ixesha elide. nokuba).
Apho ungafumana khona umsebenzi
Ukufumana umsebenzi njenge-freelancer akukho lula. Siyakulumkisa ngaloo nto. Kodwa nayo ayinakwenzeka.
Ngokuxhomekeke kumsebenzi ofuna ukuzinikela kuwo, unokufumana ezinye iiplatifomu apho unokunikela khona ngeenkonzo zakho, ubonise iiprojekthi okanye imizekelo yobuqambi bakho kwaye uqeshwe.
Ngokomzekelo, unayo amaqonga afana ne-Domestika, i-Freelancer, umsebenzi ozimeleyo, u-Workana ... apho abaninzi bacela iingcali zemisebenzi ethile eyahlukeneyo. Ngoku, awunakuhlala naloo nto.
Kukwalungile ukwenza ngaphandle kwe-intanethi kunye nezicwangciso zentengiso ye-intanethi ukufumana abathengi ngaphandle kwaloo maqonga. Okanye into ebizwa ngokuba "ngumnyango obandayo", oko kukuthi, ii-imeyile okanye ukutyelela iinkampani ezinikezela ngeenkonzo zakho.
Into ekufuneka uyikhumbule kukuba umsebenzi unokukushiya ubusuku bonke okanye uthathe iiveki ukuba umntu afike. Ngoko zama ukuba ungaphelelwa lithemba kwaye uqhubeke uzama kuba, ekugqibeleni, kukho into ethi gqi.
Ngaba umzobo womntu osebenza yedwa ucace ngakumbi kuwe? Ngaba uyathandabuza ngayo nayiphi na inkalo? Sibuze kwaye siya kuzama ukukunceda ukuba uyiphendule.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Yintoni ukuzimela
Yintoni ibhanki efanelekileyo